Kedu ka esi ruo ihe mgbaru ọsọ ahụ?
Na ndụ nke onye ọ bụla, onye na-esetịpụ ihe mgbaru ọsọ iji nweta ihe, o mere na enweghị ike na ume iji nweta ihe a chọrọ. Ndị ọkà mmụta sayensị na-akpọ nke a n'enweghị mkpali iji nweta ihe ịga nke ọma . Mkpali ọ bụla nwere njikọ na nghọta mmadụ, mmekọrịta ya na onwe ya na ndị ọzọ, yana iche echiche. Ya mere, ọ bụrụ na ị gbanwee echiche ị na-ahụ maka ụwa gburugburu, mgbe ị na-amụta iche iche iche echiche, ị na-azụlite àgwà ọhụrụ na ihe ị na-eme, nke a na-enyere gị aka ịghọta ọbụna otu esi eme ihe mgbaru ọsọ gị.
Ana m ahụ ihe mgbaru ọsọ - anaghị m ahụ ihe mgbochi.
Mgbe mmadu nwere echiche ohuru ohuru, o nwere ike igbanwe mkpali ya iji nweta ihe mgbaru ọsọ. E nwere usoro dị iche iche ga-enyere gị aka ịghọta ihe eji eme ihe na iru ihe mgbaru ọsọ ahụ.
Gbalịa cheta oge ahụ nke ndụ gị mgbe ị rụpụtara ọtụtụ ihe. Dee ya ma oburu na o kwere. Jụọ onwe gị ajụjụ a, n'ihi gịnị kpatara ugbu a ị gaghị enwe ike ịme nke ọma dị ka mgbe ahụ.
Na-ebi ndụ n'ozuzu oge mgbe ị rutela mgbaru ọsọ mbụ. Na-eche banyere ihe ị chere mgbe ahụ. Kedu ihe ị ga-eme iji chee ya ugbu a na ndụ gị?
Gbalịa ịnyefe mmetụta obi ụtọ gị ugbu a. Na ihe ị na-eme ugbu a nakwa n'ihe ị na-agbalị iji nweta ihe kpọmkwem. Gbalie ike jikọọ n'ike mmụọ nsọ nke ị jupụtara n'oge gara aga na ihe ị nwere ugbu a.
Iji nwee ike ịghọta onwe gị n'ụzọ doro anya iji mee ihe mgbaru ọsọ ọsọ ọsọ, detuo na mpempe akwụkwọ niile arụmụka, mmetụta na mmetụta ndị na-emetụta gị ugbu a.
Debe akwukwo ndu nke onwe gi . Dee ihe ọ bụla ị rụzuru, nke sitere na ndị obere na-agwụ na mgbanwe n'oge ndụ gị.
Mepụta ederede - aro, regharịa nke ị ga-esi n'ike mmụọ nsọ na oge ọ bụla karia.
Kedu esi edozi na iru ihe mgbaru ọsọ? Nke mbụ, cheta na ị kwesịrị ịgbanwe àgwà gị na mmejọ gị. Mụta iji emeso ha ihe dị mma. Atụla egwu maka ọdịda. Site na ọnọdụ ọ bụla na-adaghị adaba, ị nwere ike ịmụta ihe na azụ.
Ọbụna ma ọ bụrụ na i mere ndudue, enwere mmeri na mmejuputa ihe, egbula onwe gị maka ya. Cheta na ndị na-arụsi ọrụ ike na-enweta ọtụtụ njehie karịa ndị na-atụ egwu ịbanye. Ma mgbe onye nke mbụ nwere ohere ọ bụla iji mezuo mgbaru ọsọ a chọrọ.
Cheta ndụmọdụ ndị dị n'elu ma kwụsịkwa ikwere na onwe gị.
Kedu otu esi emeghe cafe okpomọkụ?
HYIP - gịnị ka ọ pụtara, ọ pụtara na ịzụ ahịa na ntorobịa
Kedu otu esi emeghe ụlọ mposi mara mma?
Ajụjụ ndị a na-ajụ n'oge ajụjụ ọnụ ahụ?
Kedu otu esi enweta ọgaranya na nsogbu?
Ụmụ nwanyị ndị enyi nwanyị
Gịnị na-enyere Dmitry Solunsky aka?
Tenoten ma ọ bụ Afobazol - nke ka mma?
Nodal uterine myoma
Prostokvasha - ọma na ihe ọjọọ
Akwụkwọ mgbidi «mgbidi brik»
Andpegens alopecia na ụmụ nwanyị - ọgwụgwọ
Kedu mgbe mmiri ara ehi na-abịa mgbe a mụsịrị nwa?
Achịcha "Drunken Cherry" - nhazi uzommebe
Gloxinia maka oyi
Ndozi nke ulo oru studio
Listeriosis - mgbaàmà
Kedu esi esi osi osikapa?
Laparrow maka nkịta
Kedu ka esi mụta iji susuo onye isi?
Usama Hamdiy's Diet - Menu maka 4 Izu
Egwuregwu egwu mmiri
Ihe mkpuchi anya na mmanụ na-agbanye mmanụ
Ụlọ oche n'oge ochie
Ntọala nke oge a na kichin